यिनै हुन् जुम्ल्याहा गंगा र जमुना जसको श’व २ बहिनीले उठाए, शोकमा डुब्यो सारा गाउँ ! – Online Khabar 24
यिनै हुन् जुम्ल्याहा गंगा र जमुना जसको श’व २ बहिनीले उठाए, शोकमा डुब्यो सारा गाउँ !
मंगलबार राति तम्घासमा ठूलो पानी पर्‍यो। पानी परेको चाल पाएकाहरूको मनले राम्रो सोचेको थिएन।
करिब ११ बजेर ४० मिनेट जाँदा रेसुंगा– ८ का तिलक परिवारको घरमा प’हिरो ख’स्यो। चार छोरी एकै ठाउँमा मस्त निदाएका थिए। भित्तापट्टिका जुम्ल्याहा १४ वर्षीया गंगा र जमुनासहित २१ वर्षीया भावना प’हिरोले पुरिए।
ढोकाछेउमा सुतेकी साँहिली छोरी सुजतालाई बुबाले ता’नेर बचाए। पहि’रो ख’सेको छिमेकी ईश्वर विकको परिवारले पनि चाल पाए। दुवै परिवार निकैबेर चि’च्या’एर गु’हा’र मा’गे। घाँ’टी सु’क्यो। तर, पानी निकै ठूलो परेकाले कसैले सुनेनन्। ईश्वरले प्रहरीको १०० नम्बरमा दुईपटक फोन गरे। तर, उठेन।
उनी उद्धा’रको कुनै उपाय नभएपछि अर्धचेत अवस्थामा प्रहरी कार्यालय पुगे। ‘चि’च्या’उँदा घाँ’टी बस्यो प्रहरीले फोन उठाएन। रातमा दौडिएर प्रहरी कार्यालय पुगेँ,’ उनले भने, ‘कार्यालय पुगेर पनि बोल्न सकिनँ पानी खाएपछि मात्रै केहीबेरमा बोलेँ।
करिब साढे १२ बजे सुरुमा प्रहरीको गस्ती टोली घट’नास्थल पुग्यो। उद्धा’रको सम्भावना भएन। केहीबेरमै प्रहरी प्रमुख गोपालचन्द्र भट्टराई सहितको टोली उ’द्धारमा पुग्याे। साँघुरो कोठा र पानी परिरहेकाले फेरि पनि सहज उद्धार सम्भव थिएन। तर, टोलीले प’हिरो फाल्न थाल्यो। ‘सुरुमा मान्छे पुरिएकै विश्वास लागेन। तर, केही प’हिरो फा’लेपछि भावनालाई मृ’त अवस्थामा बाहिर निकाल्यौँ,’ एसपी भट्टराईले भने, ‘पछि सेना पनि आयो, जुम्ल्याहा दिदी बहिनी पनि मृ’त भेटिए।’ करिब चार घन्टामा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले प’हिरोमा पुरि’एकाहरूलाई बाहिर निकाल्यो।
‘बुबाका अनुसार एउटी छोरीले बाबा बाबा पनि भनेकी थिइन् रे परिवारले निकाल्न सक्ने अवस्था भएन,’ उनले भने, ‘एउटै परिवारमा निकै दुः’खदायी अवस्था देख्यौँ।’ पहिरोले तीन छोरी गुमाएकी लालमती परियार अहिलेसम्म होसमा छैनन्। रातिदेखि नै विक र परियार दुवै परिवार छिमेकी खेतबहादुर भलामीकोमा आश्रय लिएका छन्।
भलामीको पिँढीमा विक्षि’प्त लालमतीले जुम्ल्याहा छोरी गंगा, जमुना र भावना सम्झेर छाती पि’टिरहेकी छिन्। जेठी छोरी सुष्मा र आफन्तले लालमतीको चित्त बुझाउन खोज्दै थिए। तीन सन्तान एकै ठाउँ गु’माएकी आमासँग मन बुझाउन कुनै उपाय थिएन । पहि’रोले भान्सा घर फुटेका छिमेकी ईश्वर विकको परिवारले पनि घर छोडेका छन्। आँगन जोडिएको अर्को घरमा तीनजनाले ज्या’न गुमाए। पानी परे पहि’रो नजिकको ढिक जुनसुकै वेला खस्ने भएकाले केही दिन घरमा नबस्ने ईश्वरले बताए।
घ’टनास्थल पुगेका रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालले श’वको अन्त्येष्टि, कि’रिया खर्चसहित ‘तक र विस्थापित परिवारलाई राहत र अन्य व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बताए यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevप्रियंकाले छोरीको जन्म दिएपछि सासू रबिनाले लेखिन् यस्तो स्टाटस !
nextह्वात्तै बढ्यो भाडादर ! दसैंमा घर जाँदै हुनुहुन्छ भने हेर्नुस भाडा कति पुग्यो ?